Vaovao - sarimihetsika PET – fitaovana fonosana fananana avo miaraka amin'ny antoka azo antoka.
Miaraka amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy, ny olona dia manome lanja bebe kokoa ny fahasalamana. Ny fiarovana ara-tsakafo dia singa iray lehibe mitaona ny fahasalaman'ny vahoaka izay noraisin'ireo mpanamboatra sakafo sy mpanara-maso avy any ivelany hatrany ho zavatra lehibe. Ny fonosana sakafo, indrindra ny fitaovana fonosana mifandray amin'ny sakafo dia mifandraika mivantana amin'ny fahasalaman'ny sakafo, manaraka ny fahasalaman'ny olombelona. koa noho izany dia misy fepetra takiana fatratra amin'ny fitaovam-pamonosanan-sakafo any amin'ny firenena vahiny amin'ny lafiny teknika sy fiarovana ara-pahasalamana. tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nanamafy ny fangatahana fiarovana ny fahasalamana amin'ny fizotry ny famokarana sakafo i Shina. manohitra an'io fiaviana io, tena zava-dehibe ny fampiasana ireo fitaovana fonosana sakafo miaraka amin'ny fiarovana ara-pahasalamana ara-pahasalamana. amin'ny maha materia famonosana lehibe azy, ny sarimihetsika BOPET dia manana ireto toetra manaraka ireto:
①Ny toetra ara-mekanika tsara, ny 3-5 dia misy ny herin'ny horonantsary hafa, maharitra amin'ny famoronan-tsary.
②Faharetana tsara amin'ny menaka, tavy, asidra olédrine ary ny ankamaroan'ny solvents.
③Faharetana tsara amin'ny hafanana be. azo ampiasaina amin'ny fotoana maharitra amin'ny 120 ℃, amin'ny teny fohy, azo ampiasaina amin'ny 150 ℃, hatramin'ny -70 ℃, kely dia kely ny fiatraikany amin'ny toetra mekanika.
④Midina azo avy amin'ny gazy sy etona, fananana misakana tsara amin'ny rano, solika ary fofona manatsara ny fiainana talantalana.
⑤ Sarimihetsika mazava tsara, fitrohana UV, sarimihetsika manjelatra ambony.
Poisontsy misy poizina, tsy misy fofona, fananana fiarovana tsara, ampiasaina amin'ny fonosana sakafo mivantana.
Ny mpanjifa dia manome lanja bebe kokoa hatrany ny fitakiana ara-pahasalamana fonosana sakafo, esp. amin'ny fiainana talantalana, fanavaozana ary fananana fanoherana bakteria. koa mitombo ny fangatahana ny fahombiazan'ny sarimihetsika PET tsara. manatsara ny kalitaon'ny famonosanan-kanina izany. tato anatin'ny taona vitsivitsy nifidianana ireo fitaovana fonosana, nohamafisina bebe kokoa ny fananana ilay fitaovana, izany dia nanafaingana ny fivelaran'ny sarimihetsika PET.
Ny permeability oxygène dia singa iray lehibe amin'ny fisafidianana fitaovana famonosana sakafo, ho an'ny paosin-tsakafo voaisy tombo-kase tsara, ny fiafaran'ny sakafo dia miakatra hatramin'ny fahazoana oksizenina. Indrindra ho an'ny fonosana banga sy fitaovana fanangonana anti-oxygen. BOPET dia manana fananana misakana gazy lehibe, eo ambanin'ny mari-pana ao amin'ny efi-trano dia indroa ny Boppet ny androm-piainan'ny sakafo fonosana Bopet. Ankoatr'izay, ny Alu.plated Bopet Film dia manana fampisehoana tsara kokoa amin'ny resaka insulate amin'ny oxygen sy ny porofo mando noho ny film Bopp. ny permeability mando an'i Alu. horonantsary Bopet nopetahaka dia hidina 0.3 ～ 0.6 amin'ny 40 ～ 45.Versus Bopp, 0.8 ～ 1.2 midina avy amin'ny 5 ～ 7. (g ／ mm2.24h.40 ℃ miaraka amin'i Alu. hateviny 60 ～ 70mm)
Ny fampiharana betsaka ny sarimihetsika Bopet amin'ny fonosana dia manatsara ny tanjaka, mampihena ny fitaovana famonosana isaky ny lanja sy ny fandotoana. Mandritra izany fotoana izany dia manitatra ny maripanan'ny mari-pana, ohatra, avy amin'ny famonosana ho an'ny sakafo mangatsiaka na hatramin'ny sakafo nandrahoina be dia be izy ireo. fampiasana teny amin'ny 120 ℃), azo ampiasaina amin'ny lafaoro misy microwave izy io. miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny fiainana maoderina, ny sakafo mikraoba dia hahazo laza malaza eo amin'ny vahoaka.
Ny horonan-tsary Bopet no fitaovana tsara indrindra ho an'ny fantsom-panafody dioxide silika. Ny sarimihetsika silicon dioxide dia natao tamin'ny alàlan'ny fampiharana ny sarimihetsika fitaratra teo amin'ny sarimihetsika BOPET, izany hoe ny fananana sakana dia noforonin'ny sosona fitaratra. ka mba hitazomana ny fananan'ny sakana mandritra ny fizotry ny fametrahana azy ary amin'ny fampiasana taty aoriana dia tsy maintsy arovana ny sosona vera tsy ho simba. ny fampiharana sy ny fampandrosoana ny sakana avo lenta BOPET- film -vacuum -deposite -silica -oxide -material dia nanosika ny fametahana sakafo ho amin'ny làlan'ny mangarahara avo lenta, azo ampiharina kokoa, fitaovam-pandraisana ny tontolo iainana. fitaratra malefaka, mitovy ny fiasan'ny tavoahangy fitaratra amin'ny fitazonana ny tsiro ary tsy hamorona fofona aorian'ny fitahirizana maharitra na fitsaboana avo lenta ary mankafy fananana Al amin'ny asan'ny sakana. ny sarimihetsika dia manana ny mangarahara mitovy aorian'ny fametrahana slica.ka ny sakafo dia hita mazava tsara avy amin'ny fonosana izay manosika ny fanirian'ny mpividy.
Tsy misy additives biolojika hafa ampiana amin'ny famokarana sarimihetsika BOPET, ary izy io koa dia fitaovana namboarina izay mahatonga azy io ho fonosana ara-pahasalamana sy ara-tontolo iainana.